फल्स चर्च, VA मा गर्भपतन हेरचाहको लागि आर्थिक सहयोग
के तपाइँलाई तपाइँको चिकित्सा सेवाहरूको लागत संग आर्थिक सहायता चाहिन्छ?
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर SAFE र LEGAL हेरचाह प्रदान गर्न समर्पित छ एक महिलाको आर्थिक स्थिति को पर्वाह नगरी। हाम्रो केन्द्र कोष संगठनहरु संग काम गर्दछ कि यदि तपाइँ आर्थिक सहायता को आवश्यकता छ भने मद्दत गर्न को लागी सक्षम हुन सक्छ। हाम्रो केन्द्र मा कल गर्नुहोस् 703-532-2500 र अधिक जानकारीका लागि अनुरोध गर्न हाम्रो एक बिरामी शिक्षकसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाइँ यसलाई तपाइँको मा पनि संकेत गर्न सक्नुहुन्छ अपोइन्टमेन्ट अनुरोध गर्न अनलाइन फारम।
हाम्रो सेवा शुल्कहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
हाम्रो बिरामी शिक्षकहरूले तपाईका तर्फबाट स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय गर्भपात महासंघ (एनएएफ) तपाईं वित्तीय सहायताको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि भनेर निर्धारण गर्न। जहाँसम्म, हामी तपाईंलाई अन्य संगठनहरूमा सहयोग पुर्‍याउन पनि प्रोत्साहन गर्दछौं:
यो DC गर्भपात कोष DC, मेरील्याण्ड, र भर्जिनियाका बासिन्दाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्दछ; साथ साथै माथिको क्षेत्रको बाहिरीबाट डीसी क्षेत्रमा आउने मानिसहरू। कृपया कल गर्नुहोस् 202-452-7464 र उनीहरूको केस प्रबन्धकहरूको लागि भ्वाइसमेल छोड्नुहोस्। तपाईंको नाम र फोन नम्बर समावेश गर्नुहोस्, तपाईं कति हप्ता गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईंको डाक्टरको भेटको मिति, र तिनीहरूलाई ठीक हो कि होइन तपाईंको भ्वाइसमेल छोड्नुहोस्। एक स्वयम्सेवकले तपाइँको फोन कल २ 24--48 घण्टा भित्र फिर्ता गर्नेछ
यो रिचमंड प्रजनन स्वतन्त्रता परियोजना तपाईंको गर्भपातका लागि संसाधनहरूको लागि मद्दत गर्न सक्षम हुन सक्छ। तिनीहरूको कोष चक्र महिनाको १ र १ 1 मा शुरू हुन्छ। कृपया कल गर्नुहोस् 888-847-1593 महिनाको ती दिनहरूमा, तपाईंको अपोइन्टमेन्ट जानकारीको साथ एक विस्तृत भ्वाइसमेल छोड्नुहोस् र एक इन्टेक कोर्डिनेटरले तपाईंको फोन कल २ 24- your48 घण्टा भित्र फिर्ता गर्नेछ।
यो निलो रिज गर्भपात कोष १ 1989 XNUMX since देखि गर्भपतन हेरचाहको लागि भुक्तान गर्न आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको सेवा गर्दै आएको छ। तिनीहरू उत्तरी भर्जिनियामा बिरामीहरूका लागि दोस्रो त्रैमासिक गर्भपात कोषको लागि सहयोग गर्न सक्षम हुन सक्छन्। कृपया कल गर्नुहोस् 434-963-0669 र भ्वाइसमेल छोड्नुहोस्। एक स्वयम्सेवकले तपाइँको फोन कल २ 24--48 घण्टा भित्र फिर्ता गर्नेछ।
यो बाल्टीमोर गर्भपात कोष गर्भपतन हेरचाहको लागि मेरील्याण्डमा बस्ने मानिसहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने एक स्वैच्छिक, गैर-नाफामुखी संस्था हो। कृपया कल गर्नुहोस् 443-297-9893 र भ्वाइसमेल छोड्नुहोस्। तपाईंको फोन नम्बर समावेश गर्नुहोस्, तपाईं कति हप्ता गर्भवती हुनुहुन्छ, तपाईंको डाक्टरको नियुक्तिको मिति, र तिनीहरूलाई ठीक हो कि होइन तपाईंको भ्वाइसमेल छोड्नुहोस्। एक स्वयम्सेवकले तपाइँको फोन कल २ 24--48 घण्टा भित्र फिर्ता गर्नेछ।
हामी फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरमा जान्छौं कि हाम्रा बिरामीहरूले यस महामारीको समयमा आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्दछ। कृपया हामीलाई सूचित गर्नुहोस् कि यदि तपाईं एक नियुक्ति योजनामा ​​रुचि राख्नुहुन्छ भने जब तपाईं आफ्नो नियुक्ति गर्नुहुन्छ।
के तपाईं सहयोगको खाँचोमा परेकाहरूलाई FCHC मा तिनीहरूको गर्भपात हेरचाहको लागि भुक्तान गर्न सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ? कृपया हाम्रो जाँच गर्नुहोस् दान कसरी तपाईं एक फरक पार्न सक्नुहुन्छ मा विकल्पहरूको लागि पृष्ठ!